Iikhoyili zomoya abavelisi kunye nababoneleli - China Umatshini womoya oMbane
Icoil yokufumana amandla engenazingcingo
AUncedo lwale coil ikumgangatho ophezulu ngocingo lwe-litz kunye neferrite fortification embindini kukuba izixhobo ezisebenzisa esi sisombululo zinokuhlawuliswa kwizikhululo zokutshaja zayo yomibini imigangatho.
Le coil yomamkeli ngaphandle kwamacingo ilungele ukutshaja i-smartphone, izixhobo eziphethwe ngesandla
Ngentando yakho iimveliso inokubonelelwa ngokwesicelo esahlukileyo.
Ikhoyili yokutshaja engenazingcingo
Ngokweemfuno zesekethe, khetha indlela yokubhijela:
Xa usonga i-coil yokutshaja ngaphandle kwamacingo, kuyafuneka ukumisela indlela yokubhijela ngokweemfuno zesekethe yesixhobo sokutshaja ngaphandle kwamacingo, ubungakanani be-coil inductance kunye nobungakanani bekhoyili, emva koko wenze ukungunda okuhle. Iikhoyili zokutshaja ezingenazingcingo ngokusisiseko zenzakele ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle, ke kuqala jonga ubungakanani bepali yangaphakathi. Emva koko misela inani lamanqanaba, ukuphakama, kunye nobubanzi bangaphandle bekhoyili ngokwemiba efana nokunyanzeliswa kunye nokumelana.
Ikhoyili yomoya ye-SMD
Olona phawu luphambili kukuba izinto eziphezulu kakhulu ze-Q kunye nokunyamezelana okungapheliyo, Njengoko igama labo lisitsho, i-air-core inductors ayisebenzisi isiseko se-magnetic, esikhokelela kwi-Q ephezulu kunye nelahleko ephantsi enokubakho kwizicelo ezinamaxesha aphezulu.
I-coil yomoya yokuncamathela
Ikhoyili yomoya wobhedu wokuncamathelisa isetyenziswa ngokubanzi kwisixhobo sonyango, izixhobo zemidlalo zangaphandle.
Kufuneka ubonelele ngolwazi olusisiseko kwinjineli yakho, sinokunceda ukuyila nokwenza ngokwezifiso iifayile ze- imveliso ukwenzela wena kuphela.
Ikhoyili yomoya enkulu yentsimbi
Ucingo lwe-Litz lusetyenziselwa inkqubo yokuhambisa umbane ngaphandle kwamacingo kunye nokufudumeza ngokungenisa ngokungqinelana ne-AC encinci yokuchasana kwisantya esiphezulu. Uqikelelo lwe-AC ukumelana nocingo lwe-Litz kubalulekile kulwenziwo lwentambo ye-Litz.Yi Uqhubekeko oluqhubayo oluqhubayo oluqhubayo kwifom encinci yomnqamlezo-kwaye uhlala usebenzisa ucingo olujikelezayo hayi umqhubi wenxande osetyenziswa ngocingo oluqhelekileyo lwe-CTC olusetyenziswa kwisiguquli esikhulu.
Inductor umoya coil
Ngaphezulu kwe-100 yoomatshini abaziqokelelelayo kumzi-mveliso wethu, sinokuqinisekisa malunga nexesha lokukhokela elikhawulezayo kunye nomgangatho wemveliso.
Sinike ubungakanani obuyisiseko, ububanzi beengcingo kunye nokujika kwesicelo, sinokujija nantoni na efanelekileyo kuwe.
Inxeba lomoya coil yenxeba
I-Helical okanye i-Edge Inxeba yomoya, Ikwabizwa ngokuba ngamakhoyili omoya aphezulu ngoku,Iyakwazi ukuphatha ukuphatha okukhoyo ngoku kunye namaqondo aphezulu.
Elungiselelweyo umoya engundoqo coil
Ngenxa yeempawu zayo, iikhoyili zomoya osetyenzisiweyo ziye zasetyenziswa ngokubanzi kwiikhoyili zelizwi kumzi mveliso we-electroacoustic, izixhobo zokuphambuka kwezixhobo ezichanekileyo, iikhoyili ezidityanisiweyo kwiimoto ezincinci, kunye neekhoyili ezincinci kwizivamvo.
Ikhoyili yomoya yekhoyili
Iikhoyili zomoya-oqhelekileyo zihlala zisetyenziselwa ukuguqula izinto ngoku, kunye nebhendi ebanzi, ubungakanani obuncinci, ubunzima bokukhanya, ukulungelelanisa imilinganiselo yedijithali kunye nokukhuselwa kwemicrosoft. Isetyenziswa ngokubanzi kubuchwephesha bethelevishini, kwitekhnoloji yeaudio, ukuhanjiswa konxibelelwano, ulwamkelo kunye nokucoca amandla, i-VCD intloko yerediyo, isandisi-lizwi se-eriyali, irekhodi lekhasethi yerediyo, imakrofoni ye-eriyali kunye nezinye iinkalo.
Icoil coil yomoya engaphakathi
Yenziwe nge-Elektrisola ifanelekile ucingo, i-coil inokuzinza okuphezulu, Sine-100 oomatshini abaziqengqelekayo ngoku kwi-fektri yethu, ixesha lokukhokelela liya kuba lifutshane kakhulu.
Ukongeza, sineentlobo ezahlukeneyo zekhoyili zobhedu.Sinokwenza ngokweemfuno zeemveliso zakho ukuze ukhethe izinto ezisemgangathweni.